allsanaag.com - Warar Kooban oo Kusaabsan Aduunka
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3208	Days	09	Hours	24	Minutes	19	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Warar Kooban oo Kusaabsan Aduunka
Written by Shanle	Syria: Mucaaradka dalka Suuriya ayaa waxey qabsadeen garoon diyaaradeed oo aad muhiim u ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka. Muuqaalo ayaa waxa lagu arki karay iyadoo mucaaradku ay ku dhex dabaaldagayaan garoonka diyaaradaha ee Taftanaz, meeshaasoo ay yaaleen diyaarado helikobter ah iyo taangiyo. Wada hadalo uga socday Geneva oo u dhaxeeyay ergiga Qaramada Midoobey ee Suuriya Lakhdar Brahimi iyo saraakii Maraykan ah iyo dublumaasiyiin ka socday Ruushka ayaanay waxba ka soo bixin. Luminta dawlada ay lumisay garoonkan diyaaradaha waxey ku tahay maskax ahaan jug gaartay ciidamada dawlada. Lama ogaan karo hadeer inta diyaaradood ee ku burburay intii dagaalka uu ka socday garoonkaas iyo inta ay la baxsadeen dawlada.
France: Dawlada Fransiiska ayaa faragelin ku sameeneysa dalka Mali si loola dagaalamo jabhada Al Qaacidada wadankaas. Madaxweynaha France ayaa ku dhawaaqay arrintaas kadib markii dawlada wadanka Mali ay ka codsatay faransiiska iney la soo gaaraan gargaar military oo deg deg ah maalintii khamiista aheed. Jabhadan ayaa qabsatay magaalada ku taal bartamaha wadankaas oo lagu magacaabo Konna. Hase ahaatee, Wararkii ugu danbeeyay ayaa waxey sheegayaa in ciidamada Mali ay dib u qabsadeen magaalada Konna. Dhinaca kale, Qaramada Midoobay ayaa ansixisay qorshayaal loogu dirayo ciidamo gaaraya 3,000 oo ah ciidamo Afrikaan ah si ay dib uga qabsadaan waqooyiga hadii aan la helin xal. Macada Fransiiska taageerada ay bixinayaan nooca ay tahay, laakiin waxaa loo maleenayaa mid dhinaca cirka ah.
Gaza: Dawlada Imaaraadka Carabta ayaa ku deeqday $50 million oo dollar Falastiiniyiinta; lacagta ayaa loogu talagalay in lagu dhiso magaalo kutaal Gasa, magaceeda ayaa waxa uu noqonayaa Shaikh khalifa. Dhismayaashaas ayaa loogu talagalay dadka laga soo daayay xabsiyada.